Ubuntu တွင် Ruby ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
Perseus | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, ပရိုဂရမ်းမင်း, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွေမှာငါဟာပရောဂျက်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နဲ့အလုပ်များနေတယ် <° FromLinux (ဒါကြောင့်ငါ့မရှိခြင်း: P) ငါဒီစီမံကိန်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ် ရထားလမ်းပေါ်တွင်ပတ္တမြား.
ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချို့ဖြန့်ဝေမှုများသည်မလာပါ ပတ္တမြား ပုံမှန်အားဖြင့် install လုပ်ပြီး repositories ထဲမှာပေါ်လာသောဗားရှင်း "အဟောင်း" ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားသူများအဘို့, သူတို့ကထိုကဲ့သို့သောတပ်ဆင်တစ်ခုခုကြောင်းနားလည်လိမ့်မယ်«ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲသော«ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါဘယ်လိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးပါမယ် Ruby နှင့် RubyGems Ubuntu နှင့်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောအရာများကိုရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့် :) ။ Debian အတွက်လည်းဒီဟာကလုပ်နိုင်မလားမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှကြိုးစားဝံ့သူရှိရင်၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ ) အခြားဖြန့်ဝေမှုများတွင်ငါသည်လည်းအလားတူသို့မဟုတ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအထုပ်ကိုရှာရန်ကိစ္စသာဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သည်။
ဝဘ်ကိုဖွင့ ်၍ မှန်ကန်စွာပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုကြိုးစားရှာဖွေပြီးနောက် (အောင်မြင်မှုမရရှိပါက (()) ကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်တွင်၎င်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် script သေးငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အမှားများ နှင့်အနည်းငယ် သတိပေးချက်များဒါကြောင့်ဒီတွင်းနက်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တာ ၀ န်ယူပြီးသက်ဆိုင်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်အချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါ Ruby အတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သော packages များသာပါဝင်သည်ကြောင်းရှင်းလင်းရပေမည်;) ။
ကောင်းပြီ, နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ဒီမှာပြုပြင်ထားသော script ကိုဖြစ်ပါသည်:
သင်မြင်သည့်အတိုင်းအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤနေရာတွင် script ၏အရေးကြီးသောအချက်မှာ၎င်းတို့ install လုပ်လိုသည့် Ruby version ကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ယနေ့အထိနောက်ဆုံးပေါ် version ကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်အခြား version တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါကအောက်ပါလိုင်းကိုသာပြုပြင်ရမည်။
သင်ထည့်သွင်းလိုသောမူကွဲအတွက် script ကိုမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်မူကွဲနံပါတ်ကိုသာသင်လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဖိုင်ကိုအမည်ပြောင်းပါ install_ruby
မှတ်ချက်များကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ မင်္ဂလာ coding ????
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Ubuntu တွင် Ruby ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အိုကေ။ စောင့်ပါ။ ဘယ်စီမံကိန်းလဲ။
အိုကေငါ့ကိုအချိန်နည်းနည်းပေးပြီး debian ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာမင်းကိုငါပြောပြမယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်များစွာအသုံး ၀ င်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ သင်၏ဇာတ်ညွှန်းတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိ၊ မရှိအားနည်းချက်ကိုသိလိုလျှင်သိနိုင်သည်မှာစိတ်ကူးမရှိပါ။ XD
troll on mode: ပတ္တမြားသည် hipsters ၏ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ xD
[mode troll on] သေချာတာပေါ့၊ ဒီမှာတွေ့ရသလိုပဲ၊
[/ mode ပိတ်ထားသည်]
သင့်ကိုပြင်ပေးပါ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်၊ "Kubuntu Firefox" ဖြန့်ဖြူးမှုမရှိပါ။ 😛
ဂီလ်ဘာ ၁၉၈၈ ဟုသူကပြောသည်
kubuntu terminal တွင် "apt-get install firefox" တွင်
အလွန်ကောင်းတဲ့ script Perseus ကံမကောင်းတာက Ubuntu ကိုကျွန်တော်စမ်းဖို့မသုံးတာ။ S Ruby နဲ့ Python တို့ကငါလေ့လာချင်တဲ့ဘာသာစကားတွေ။ မဆိုထောက်ခံချက် ???
Ruby အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့ Ebooks တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကအကောင်းဆုံးကတော့အင်္ဂလိပ်လိုပါပဲ။ ဒါကသင့်ကိုတားဆီးမထားဘူးဆိုရင်သင်ဖတ်နိုင်သည်။ ပတ္တမြားအသစ်မှစတင်ပြီးမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒုတိယစာစောင် (Peter Cooper) သို့ - Apress။ ဒီဘာသာစကားမှာရှိနေပေမယ့်လည်းအင်္ဂလိပ်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်ရခက်တယ်၊ ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုပါ။ ) ။
Python အတွက်တော့ web ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကငါတို့ဘာသာစကားနဲ့ပါ။ :)
သင်ပတ္တမြားလင့်ခ်တစ်ခုလိုအပ်ပါကငါ့ကိုအသိပေးပါ၊ ၎င်းကိုမင်းထံသို့ပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်။ ^ ။ ^
ထောက်ခံချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Perseus ကျွန်ုပ်သည်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသိသော်လည်းဖတ်ရန်ကြိုးစားပါမည်
Ruby ကို install လုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် rvm ( https://rvm.io/ )
ဟုတ်တယ်။ Debian မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမယ့် terminal မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်။
Debianite Merlin အားပြန်ပြောပါ
သငျသညျ execute ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်
sudo chmod + x scriptname ...